Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Danemarka
Tahiry isam-bolana Novambra 2013 1 Lahatsoratra Oktobra 2012 1 Lahatsoratra Marsa 2012 1 Lahatsoratra Febroary 2012 1 Lahatsoratra Janoary 2012 1 Lahatsoratra Septambra 2011 1 Lahatsoratra Mey 2011 2 Lahatsoratra
Janoary 2011 1 Lahatsoratra Desambra 2010 1 Lahatsoratra Novambra 2010 1 Lahatsoratra Desambra 2009 1 Lahatsoratra Mey 2009 1 Lahatsoratra Desambra 2008 1 Lahatsoratra Tantara misongadina mikasika ny Danemarka	Global Voices Podcast: Taom-baovao 2012 Feno Fahavitrihana Anatin'ity andian'ny podcast ity dia hamerina hibanjina ny taona 2011 isika, handinika ireo fitoviana sy fahasamihafàna eo amin'ny fanaovan-gazety mahazatra sy ny fampiasàna ny media vaovao, hamantatra momba ny fihaonan'ny Rising Voices mitondra aingam-panahy natao tany Bolivia mba hanohanana ny fivoaran'ny tontolon'ny bilaogin'ireo teratany sy tsy mitovy ara-piaraha-monina. Nanao dia... 09 Novambra 2013 ‘Ny Vehivavy Dia Tokony Hanaiky’, Sy Tolo-hevitra Hafa Mivoaka Amin'ny Karoka Google Mpanoratra Tetyana Bohdanova · Alemaina 05 Marsa 2012 Fiombonambe Eraopeana : “Alea (non) ACTA est” ? , na tsy mbola vita ve ny fanapahana? Mpanoratra Suzanne Lehn · Eoropa Afovoany & Atsinanana 04 Janoary 2012 Global Voices Podcast: Taom-baovao 2012 Feno Fahavitrihana Mpanoratra Jamillah Knowles · Afrika Mainty Tantara Malaza Indrindra Manerantany 2 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaMpianatra Bahrainita nahazo ny laharana voalohany miditra am-ponja fa tsy miditra an-tsekolim-pitsaboana
Tantara mikasika ny Danemarka 06 Oktobra 2012
Danemarka: “Arahabaina Nisara-Panambadiana” Amin'ny Banky Lehibe Mpanoratra Maria Grabowski · Fanoherana “Tena vonona haka vola eto marina ve ianao?” Toy izany ny fanontaniana tazana manerana ny “milina fakàna vola” isaky ny banky lehibe ao Danemarka nandritra ny volana Septambra. Fanentanana mandritra ny andro fankalazana ny ‘Androm-Piovàna Banky izay nanomboka tamin'ny 1 Oktobra izany. Olom-pirenena tsotra no tompon-kevitra tamin'ny fanentanana amin'ny “Androm-Piovàna Banky’...
Danemarka : Farany, Niantso Fifidianana Ny Praiminisitra Mpanoratra Maria Grabowski · Fifidianana Androany(26 Aout 2011), nanala ny fitaintainan'ny Danoa ihany ny Praiminisitra Danoa Lars Løkke Rasmussen nony farany, tamin'ny fiantsoana fifidianana parlemantera : ny andro lehibe dia afaka telo herinandro, ny 15 septambra. Maria Grabowski no manolo-tena mitatitra indroa amin'ny aterineto ny nateraky ny fiandrasana ela ny fanambaràn'ny PM.
Toekarena Erantany: Ny Lanjan'ny Vehivavy Amin'ny Resaka Fahantràna, Asa ary Trosa Mpanoratra Juliana Rincón Parra · Afrika Mainty Ny fanehoan'ny International Museum of Women / Tranombakoka Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy teo anivon'ny aterineto mikasika ireo vehivavy sy ny toe-karena, manasongadina sary mifandimby, podcasts, lahatsary sy andrana momba ireo vehivavy any amin'ny firenena toa an'i Sodana, Danemarka, Filipina, Etazonia, Costa Rica, Meksika, Arzantina sy ny fahitan'izy ireny ny olana... 18 Mey 2011
Danemarka: Lalàna mampiady hevitra amerenana ny fisavana an-tsisintany Mpanoratra Maria Grabowski · Fifandraisana iraisam-pirenena Nanambara vao tsy ela ny famerenana indray ny fisavana an-tsisintany miaraka amin'i Alemaina sy Soeda ny antoko ankavanana nasionalista Danoà, ny antokon'ny vahoaka Danoà (Dansk Folkeparti/DF). Tsy nahovoka ny antoko eo amin'ny fitondrana afovoany-ankavanana vitsy an'isa ka dia lany ilay tolo-kevitra. Nanampoka ny maro izany fanapahan-kevitry ny Danoà izany satria...
Tonisia: Manako eran-tany ny antsoantson'ireo mpanohitra Mpanoratra Amira Al Hussaini · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Ny kiak''ireo Tonisiana, manohitra ny kolikoly sy ny tsy fisian'asa nandritra ireo roa herinandro lasa, dia mihamalalaka kokoa ao amin'ny Aterineto. Mihetsika manaraka azy ireo sy manely ny antsony ireo mpampiasa aterineto maneran-tany.
Karazana fahandroan-tsakafo Krismasy eo amin'ny Bilaogin'ny Sakafo amin'ny ankapobeny Mpanoratra Maria Grabowski Kjær · Amerika Avaratra Midika hoe 'mody an-trano' ny Krismasy ho an'ny olona maro - nefa rehefa tsy mety izany, dia mety ho fampaherezana ihany koa ny mikarakara sakafo mahagaga. Nizara ireo nahandro fialan-tsasatra tena tiany ireo mpitoraka bilaogy manerana ny kaontinana maro. Miaraka amin'ireo, afaka manonofy ianao miverina an-tanindrazana na mitsidika toerana izay... 09 Novambra 2010
Danimarka: TV Kiorda Voampanga ho Manohana Mpampihorohoro Mpanoratra Maria Grabowski Kjær · Fahalalahàna miteny Voarohirohy ho manohana terorista (mpampihorohoro), hoy ny mpampanoa lalàna any Danimarka ny Roj TV, Fahitalavitra iray mandeha amin'ny zanabolana miteny amin'ny fiteny kiorda ary miorina any Danimarka. Mety ho foanana ny fahazon-dàlan'ny fahitalavitra rehefa mandeha ny fanadihadiana. Ny mpanao famotorana avy amin'ny fanjakana moa dia milaza fa miray tendro amin'ny...
28 Desambra 2009
Danemarka: Miàla any ireo mpitaky hetran'ny toetr'andro Mpanoratra Solana Larsen · Fanoherana Ny mpitaky hetran'ny toetr'andro dia vondron'olona avy any Danemarka sy Afrika izay manao fanamby ny fitakiana amin'ireo firenena vaventy ny handoavan'izy ireny ny hetran'ny toetr'andro amin'ireo firenena an-dàlam-pivoarana.
Tontolo: Arahaba nahatratra ny Fetin'ny Reny! Mpanoratra Jillian C. York · Amerika Avaratra Felam-boninkazo tany Xela, Guatemala nalain’i Erik++ ao amin’ny Flickr Raha misy ny zavatra iombonan’ny olombelona rehetra, dia ny hoe samy manana reny daholo isika rehetra. Ary amin’ny faritra maro eran-tany dia fahazàrana ny mankalaza ny renintsika amin’ilay andro miavaka iray: ny Fetin'ny Reny. Na dia miovaova aza ny daty ankalazana...